#6 Tantara any an-kafa… any Tanzania: Ady amin’ny kolikoly izay tarihin’ny filoham-pirenena John Mugafulu - Transparency International - Initiative Madagascar
Nivoaka ny 31 Aogositra 2016 ao amin'ny Tantara any an-kafa
Rehefa tonga teo amin’ny fitondrana ny volana oktobra 2015 Andriamatoa John Mugafulu dia nataony laharam-pahamehana ny ady amin’ny kolikoly amin’ny alalan’ireo asa tanterahiny. Nitondra fanovana goavana teo anivon’ny fitondrany tokoa ny filoha. Isan’ireo nalàny tamin’ny toerany ny talen’ny biraon’ny ady amin’ny kolikoly izay efa nitàna io andraikitra io nandritry ny 9 taona. Izany dia satria tsy nisy firy fandraisan’andraikitra mazava amin’ny ady amin’ny kolikoly tao amin’ity firenena ity.
Tompon’andraikitra lehibe iray eo anivon’ny polisim-pirenena no tale vaovao. Hentitra ny rafitra ao Tanzanie manomboka izao. Maro ireo mpitantana orinasa lehibe no tsy maintsy manome ny vaovao farany mahakasika ny adidin’izy ireo manoloana ireo ivon-ketra sy ny fadin-tseranana. Ankoatr’izany dia namafisina ihany koa ny rafi-panarahamason’ny fadin-tseranana. Mivezivezy manaramaso eraky ny seranatsambo ireo polisy mba hahazoana antoka fa tena voaloa tokoa ny hetra alohan’ny hivoahan’ireo entana. Ho asiana fakantsary mpanaramaso ihany koa eny anivon’ireo biraon’ny seratsambo rehetra. Ireo mpiasam-panjakana izay hivoaka ny firenena kosa dia harahimaso ary tsy maintsy manaporofo izy ireo fa izy tenany no mandoa ny vidin’ny tapakilam-piaramanidina.
Ny fitsarana manokan’ny ady amin’ny kolikoly koa dia nanomboka ny asany ny 1 jolay. Nandritry ny fampielezan-kevitra nataony ny volana oktobra 2015 dia efa nilaza ny filoha John Mugafulu fa hametraka io fitsarana manokana io satria laharampahamehana aminy ny ady amin’ny kolikoly. Ho vetivety dia ho voatsara ireo raharaha mahakasika ny kolikoly sy ny tsolitra amin’ny fisian’izy io. Ny fametrahana io fitsarana io koa dia efa mampiseho ny finiavan’ny fanjakana hiady amin’ny kolikoly.
Ny lahatsoratra feno dia hita ao amin’ny tranokala RFI Afrique http://www.rfi.fr/afrique/20151218-tanzanie-directeur-bureau-lutte-contre-corruption-limoge sy ny tranokala French.China.CN.Org http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-07/01/content_38785803.htm
Sy ny tranokala Le Monde.fr http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/18/tanzanie-le-grand-coup-de-balai-de-john-magufuli_4834676_3212.html